Moments leh saaxiibo 42
Waqtigaa ku jira qaybahiisa sanadaha, bilaha, toddobaadka, maalmaha, saacadaha, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada wixii waraaqo jireed ama hababka kale ee jidhka bini'aadamka ah? Hadday sidaas tahay, maxay yihiin waraaqaha?
Waxaa jira isku xirnaan sax ah oo udhaxaysa qiyaasaha dabiiciga ah ee waqtiga ee wareegga qorraxda, dayaxa iyo meerayaasha iyo qaababka jir ahaaneed ee jirka bini aadamka, laakiin qeybinta ay sameysay habka farsamoyaqaanka ee dadku ma ahan mid sax ah.
Cilmiga guud ahaanba waxaa matalaya dhammaan waxa lagu arki karo ama la fahmi karo ee samooyinka ama meelaha bannaan; Caalamkani wuxuu u dhigmaa jirka jirka ee ninka; waaxyaha xiddigta, tusaale ahaan, waxay u dhigmaan dareemayaasha iyo ganglia jirka. Qorraxda, dayaxa, dhulka, iyo xiddigaha ayaa loogu yeedhay meerayaasha wata dayax gacmeedyadooda ama dayax gacmeedyadooda, oo ku dhaqaaqa meerahooda gaarka ah.
Isagoo ka hadlaya ama u malaynayaya inuu noqdo “ifafaale ifafaale oo adduunka ah,” oo lagu muujiyey dhaqdhaqaaqyada waxa loogu yeedho maydadka jannada, iyo isbeddelada iyo ifafaalaha sidaas lagu soo saaray ee la xidhiidha dhulka, waxaa jira xiriir ka dhexeeya kuwan ifafaale iyo jirka caadiga ah ee bini’aadamka oo howlaheediisa jir ahaaneed iyo isbadalada iyo natiijooyinka halkaas laga soo saaray. Laakiin nabadgelyadeena uma wanaagsana inaan ogaanno waxyaalahaas; Waa inaanu furin sanduuqa Pandora.
Waa muhiim oo ku filan in la ogaado in ay jiraan laba jeerm oo ku jira jidhka bini’aadamka kuwaas oo matalaya oo u dhigma qoraxda iyo dayaxa. Habka dhalinta ee jirka u dhiganta iyo waxay la xiriirtaa nidaamka qoraxda. Laakiin xubin kasta oo ka mid ah nidaamka qoraxda waxaay leedahay xubno u dhigma jirka. Abuurka iyo carrada nidaamka dhalinta waa natiijada ficil ee xubnaha jirka ee u dhigma qorraxda iyo dayaxa. Nuxurka ama soosaarka ka dhasha ficillada xubnaha, u dhigma iyo laxiriirta meerayaasha, waxay shaqadooda ku qabtaan iyagoo adeegsanaya nidaamyada kala duwan ee jirka, waxayna dhammaantood ka wada shaqeeyaan dhaqaalaha guud ee jirka muddada noloshiisa caadiga ah, in shaqada jidhku u go’an tahay in la dhammaystiro.
Jirka dhexdiisa waxaa ku jira mabda 'wakiil u ah oo u dhigma qorraxda. Tani waxay usocdaa kor iyo kor ama jirka agagaarkiisa, maadaama qorraxdu usheegayso inay sameyso hal goob dhameystiran iyada oo loo marayo laba iyo tobanka astaamaha zodiac. Laga soo bilaabo astaamaha astaamaha u dhigma madaxa bini-aadamka, ilaa habka kansarka calaamadda, oo u dhigma naasaha ama laabta, ilaa maktabada calaamadda u dhiganta meesha (ma aha xubnaha) galmada, iyo ilaa habka calaamadda loo yaqaan 'capricorn', u dhigma laf dhabarta ee wadnaha wadnaha, oo mar labaad ku noqda murqaha madaxa, waxay jeermiga ama qoraxda jirka uga gudbisaa astaamaha zodiac-ka waqtiga hal safar qorax ee sanadkii. Jirka waxa ku jira wakiil jeermis kale oo dayaxa ah. Jeermiska qoob-ka-ciyaarku waa inuu kudhamaa dhammaan astaamaha zodiac. Si kastaba ha noqotee, sida oo kale badanaa maahan kiiska. Zodiac dayaxu ma ahan zodiac-ada adduunka. Dayaxu wuxuu kacaan ka sameeyaa zodiac-ka jirka dhexdiisa sagaal iyo labaatan iyo maalmo jajab ah, oo u dhigma bisha dayaxa. Markay dayaxu buuxsamo waxay ku jirtaa xannuunkeeda zodiac oo jeermigiisa ku jira waa inuu ku yaal madaxa; rubuc-udambe waa kansarka zodiac-ka iyo naaska jirka; mugdiga dayaxa ee u soo jeedsada dayaxa cusub waa maktabadda loo yaqaan 'zodiac' ka dibna jeermigiisa ku jira jirka wuxuu ku yaal gobolka galmada. Saddexda bilood ee hore ee bisha waxay ku jirtaa xudunta iyo jeermiga jidhku waa inuu ahaadaa wejiga laf-dhabarta ee ka soo horjeedda wadnaha, halkaasna jeermiga jirku waa inuu xagga sare ugu gudbaa madaxa, markay dayaxu buuxsamo astaamaheeda . Markaa sanadka qoraxda iyo bisha dayaxa ayaa lagu gartaa jirka gudeheeda jeermiga wakiilkooda jirka gudbiya.
Toddobaadka waxaa laga yaabaa inuu yahay qiyaasta ugu da'da weyn jadwalka taariikhda aadam kasta. Waxaa lagu duubay kalandarka taariikhda dadka ugu da'da weyn. Dadka casriga ah, daruuri, waxay ka soo amaahdeen. Maalin kasta oo ka mid ah usbuuca waxay la xiriiraan qorraxda, dayaxa, iyo meerayaasha, oo maalmuhu ka soo baxaan magacyadooda. Nolosha jidhka bini aadamka waxay u dhigantaa hal muuqaal oo ah nidaamka qoraxda. Toddobaadka jirkiisa bini aadamka wuxuu u dhigmaa cabir yar oo lamid ah.
Maalintani, oo ah kacaanka dunida marxaladdeeda wareegsan, waa mid ka mid ah toddobada toddobaad ee toddobaadkan, oo muddadii weyneyd ayaa mar labaad la matalaa. Jirka bini’aadamka, jeermiga ama mabda’a u dhiganta dhulka wuxuu ka dhigaa mid dhameystiran wareeggiisa, oo u dhigma kacaanka dhulka. Isbarbar dhigyadan, sanadka qoraxda iyo bisha, bisha dayaxu yahay, usbuuca, maalinka qalliinka jir ahaaneed ee jirka bini’aadamka, wuxuu ku dhammaadaa maalinta. Waxa jira tillaabooyin kale oo yar yar oo ah “isku-darnaanta ifafaalaha adduunka” oo si sax ah ula mid ah maaddooyinka iyo geedi socodka jirka bini aadamka. Laakiin saacadda, daqiiqada iyo labaad, waxaa la sheegan karaa uun nooc shaxeed oo udhaxeeya caalimiga iyo jir ahaaneed ayaa sheeganaya nooc isbarbardhig ka dhexeeya ifafaalaha caalamiga iyo jir ahaaneed. Saacadda, daqiiqada iyo labaad ayaa la dhihi karaa inay yihiin isbarbardhigyo isugeyn casri ah. Markii cabirka loogu yeero labaad la qaatay waxaa loo maleynayay inuu yahay mid waqti gaaban ah looma baahna isku day kasta oo lagu kala qaybiyo. Sayniska jirku waxay sameeyeen isla qaladka markay magaca magaca atom u qaybiyeen qaybaha daqiiqadda ee loo arko inay yihiin cunsuriga. Markii dambena waxay ogaadeen in mid kasta oo “atom” ah inuu yahay duni yar oo lafteeda, qeybaha ay ugu magacdaran elektarooniyada, ion, in kasta oo suurta gal ay tahay in ion aysan aheyn kala qeybsanaan. Jirka aadanaha waxaa loo habeeyay oo waa inuu u dhaqmaa si la mid ah ifafaalaha ku yaal caalamka, laakiin sida caadiga ah qofku wuxuu farageliyaa howlaha jirka iyo howlaha caadiga ah. Kadibna wuxuu galay dhibaato. Xanuun, silica iyo cudurku waa natiijada, kuwaas oo ah habsami u socodka jirka ee dadaalka dabiiciga ah si loo soo celiyo xaalad caadi ah. Habraacyadaas ku jira jidhka bini-aadamka waxay leeyihiin is-waafajintooda isku dhaca iyo curyaaminta dabeecadda, si loo joogteeyo isu-dheellitir. Haddii nin jirkiisa ka mid ah uu la shaqeyn doono isla markaana aan wax badan ka soo horjeedin dabiicadda, wuxuu baran karaa isku xirnaanta saxda ah ee ka dhaxaysa qayb kasta oo ka mid ah jirka iyo qaybta ku habboon ee adduunka iyo geedi socodkooda isugeynta.